« Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika » (2 Timoty 1 : 8a)
NDAO HO ANY TOAMASINA ISIKA!
Manasa antsika kristianina zanaky ny FJKM rehetra ho any Toamasina, hiara-mankalaza AN’ANDRIAMANITRA AMIN’NY IVON’NY JOBILY FAHA 50 TAONAN’NY FJKM (1818-2018) SY NY FAHA 200 TAONA NAHATONGAVAN’NY MISIONA LMS (1818-2018) TETO MADAGASIKARA
Toy izao no dinidinika momba izany:
1-Entanina ny Prezida Synodaly, ny Mpitandrina sy ireo Birao mpiara-miasa aminy avy, mba samy hanentana ny Kristianina ao aminy hamonjy izany ivon’ny Jobilin’ny FJKM sy ny LMS izany, araka izay azo hatao.
2-Ny fotoam-pankalazana dia ALAHADY 12 AOGOSITRA hatramin’ny ALAHADY 19 AOGOSITRA 2018 ho avy izao: Filaharambe, vela-kevitra, fanentanana samihafa, fiaraha-misakafo, ranti-tsary, fitsangatsanganana, fanatanjahan-tena, ary Fanompoam-pivavahana, no hanamarihana izany fotoan-dehibe izany.
3-Ny fivantanana sy ny fatoriana any Toamasina dia efa nomanin’ny Komity any an-toerana ; ho an’ireo Fiangonana Sampana sy Fikambanana maniry horaisin’ny Synodamparitany dia miantso mivantana ireto laharana ireto: 034 14 088 44 (PS) – 034 20 883 11 (KM SP)- 034 45 828 67 (KM SP)
4-Misy fiara iombonana karakarain’ny Komitin’nyJobily: Ny fisoratana anarana dia atao mivantana ao amin’ny Biraon’ny ARORIAKA Foibe FJKM- Analakely. Ny saran-dàlana dia Ar.55 000 (Dimy Arivo sy Dimy Alina Ariary). Mandroso sy Miverina Toamasina – Antananarivo, Mandroso sy miverina Antetezapasika – Toamasina (Miandry antsika any ny fiara rehetra). Ambonin’io ny fiantohana (essence)
5-Ny fisoratana anarana momba ny fivahinianana any Toamasina (antsoina mivantana) sy ny fiara Iombonana (Aroriaka FJKM) dia hifarana ny 03 Aogositra 2018 ho avy izao.
6-Hisy ny sakafon-jobily ho antsika rehetra tonga any Toamasina, ny Sabotsy 18 Aogositra koa iangaviana mba hivonona amin’ny fitaovam-pihinana isika rehetra.
7-Tsarovy ny fandraisan’anjarantsika amin’ny fanorenana ny tsangambato fa tena ao anatin’ny “finition” isika izao; samy hanefa izay inian’ny fony sy ny fitiavany ny tsirairay ary raisina am-pifaliana izay hatolontsikaho amin’izany.
8-Hisy ireo kojakoja fahatsiarovana ho enti-mijoro vavolombelon’ny Tompo ao anatin’izao fankalazana izao, koa entanina ny rehetra hivonona sy handray anjara amin’ny fividianana izany (boky tantara, ny programa samihafa, ticket sakafon-jobily (Ar.1000), tee-shirt, autocollant, casquette… sns).
9-Ento am-bavaka izao asan’Andriamanitra izao sy ny Komity ary ny FJKM.
Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka manatona mivantana ny Biraon’ny ARORIAKA, ao Ifanomezantsoa Analakely – Foibe FJKM na hiantso ny laharana:
Pasteur RANDRIAMISATA Roger : 033 09 101 91 –Tomponandraikitry ny serasera
Pasteur ANDRIAMASINORO Fidimalala : 033 12 395 77- Sekreteran’ny Komity
Pasteur RABEHATONINA James : 033 12 352 36 – Filoha Mpanampy Komity
Loharanom-baovao (KOMITY JOBILY FAHA 50 TAONAN’NY FJKM SY FAHA 200 TAONA NIDIRAN’NY MISIONA LMS)
Crée le vendredi 27 juillet 2018 à 09:22:22